အင်ဒိုနီးရှားတွင် မိန်းမလျာအဖြစ် လိင်ပြောင်းလဲ ထားသူများကို ရဲက ဆံပင်တို အတင်းအဓမ္မညှပ်ပြီ - Yangon Media Group
ဂျကာတာ၊ ဇန်နဝါရီ ၃ဝ
ကမ္ဘာပေါ်တွင် မူဆလင်ဘာသာဝင်အများဆုံးရှိရာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် လိင်ပြောင်းထားသူအမျိုးသမီးများအား ရဲအဖွဲ့က ဆံပင်တိုညှပ်စေပြီး ယောက်ျားအဝတ်အစားများ အတင်းအဓမ္မဝတ်စားခိုင်းခဲ့သည်ဟု မိန်းမလျာ၊ ယောက်ျားလျာများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဟာတိုယိုက ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုလိုက်သည်ဟု ဇန်နဝါရီ ၃ဝ ရက် သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
”အပြစ်ကရှိတဲ့သူတွေကို ရဲကဖမ်းပြီး ဆံပင်အတိုအတင်းညှပ် ခိုင်းတယ်တဲ့ဗျာ..။ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အံ့သြဖွယ်ရာပါပဲ”ဟု ၎င်းကပြောကြားလိုက်သည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့က အာကျေး ပြည်နယ်တွင် ရဲများသည်အလှပြင်ဆိုင်များသို့ အတင်းဝင်ရောက်ကာရှာဖွေပြီး လိင်ပြောင်းထားသူ ၁၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ယင်းတို့သည် ဘာသာရေး စည်းကမ်းကို ချိုးဖောက်ကြသူများ ဖြစ်သည်ဟု ရဲများက မိန်းမများအ ဖြစ် လိင်ပြောင်းထားကြ၍ တားမြစ် ပေးပါရန် မိဘများကလာရောက် တိုင်ကြားကြသည်ဟု ဒေသန္တရရဲ အဖွဲ့အကြီးအကဲ အာမက်အွန်တန် ဆူရီယန်နာတာက ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
”အဲဒီလို လိင်ပြောင်းထားသူတွေ တစ်နေ့တခြားများပြားလာနေပါ တယ်။ ကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးဗျာ”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားလိုက်သည်။ ဆူမတြားကျွန်းပေါ်ရှိ အာကျေးပြည်နယ်သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာရေးစည်းကမ်းများဖြင့် အုပ်ချုပ်ရာနယ်မြေဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်အတွင်းက အရက် ရောင်းသူ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် တစ်ဦးအား လူမြင်ကွင်းတွင် ကြိမ်ဒဏ်ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခဲ့သည်။ ဘာသာရေးစည်းကမ်းမလိုက်နာသူများအားလည်း ရဲများကလူမှုကျင့် ဝတ်ဖောက်ပြန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ခေါင်းတုံးအပြောင်ရိတ်ကာ အပြစ်ပေးလေ့ရှိသည်။ လိင်ပြောင်းထားသူများအား ဖမ်းဆီးကာယော က်ျားသားတစ်ဦးပမာလမ်းလျှောက် စေခြင်း ယောက်ျားပီသသောအပြော အဆိုများအားလည်း သင်ပေးကာ ပြန်လွှတ်လေ့ရှိသည်။
”ဒီလိုဟိုမရောက် ဒီမရောက် ပုံစံမျိုးနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ငံတိုးတက် တော့မှာလဲ”ဟု ရဲများက ပြောဆိုလိုက်သည်။ လိင်ပြောင်းလဲသူများသည် အင်ဒိုနီးရှားတွင် အာကျေးပြည်နယ်မှ လွဲ၍တစ်နိုင်ငံလုံး၌ တရားဝင်ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။
Reg;The Bangkok Post
ဆီးချိုနှင့် သွေးတိုးရောဂါများ အိန္ဒိယတွင် ဖြစ်ပွားသူများပြား
ညောင်ဦးတွင် စာသင်ကျောင်းဆောင် မရှိ၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ထန်းရွက်မိုး ထရံကာဖြင့် ပည??
ထိုင်းအလုပ်ရှင်၏ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုအပေါ် စေလွှတ်ထားသည့်အေဂျင်စီများကို ဧပြီလမှဇူလိုင်လအထိ ရိ??